Hawaasni Oromoo Neezerlaand hiriira mormii Dan Haagitti geggeesse | Oromo Nederland
Den Haag – Hawaasni Oromoo Neezerlaand hiriira mormii cimaa Bitootessa 22, 2018 magaalaa Dan Haagitti geggeesse. Oromoonni biyya Neezerlaand baay’inaan bayuudhaan Labsii Yeroo Muddamaa tibbana mootummaan Woyyaanee ummata keenna ukkamsuudhaaf yeroo lammaffaaf labsite balaaleffataniiru. Labsiin kunis saffisaan ummata irraa akka ka’us gaafataniiru.
Hawaasni hiriira kana irratti hirmaate dararaan sirna Woyyaanee jalatti lammii isaanii irra gayaa jiru kan isaan yaachisu, ajjeechaa fi gidiraan oromoo irra guyyaa gauyyatti gayaa jiru kan isaani gaddisiisu ta’uus ibsaniiru. Hirmaattoonni hiriira kanaa hanga qabsoon Oromoo injifannoon goolabamutti karaa danda’amu hundaan lammi isaanii bira kan dhaabatanii fi karaa danda’amu hundaan qabsoo bilisummaa kan tin’isan ta’uus dubbataniiru.
Hiriira kana irratti bakka bu’oonni hawaasaa Waajjira Ministera Haajaa Biyya-alaa Neezerlaanditti argamuudhan aangawoota dubbisaniiru. Akkasumas xalayaa giiraa Oromooo irra gayaa jiru ibsus galchaniiru. Aangawoonni Ministera Haajaa Biyya-alaa Neezerlaandis haalli Itoophiyaa keessa jirtu yeroo kamuu caalatti kan isaan yaachise ta’uu ibsanii, mootummaan isaanii karaa embaasii isaanii Finfinnetti argamuun dhimicha duukaa bu’ee hordofaa kan jiru ta’uus dubbatan. Rakkoo Itoophiyaan keessatti argamutu fufruufis qooda isaani irraa eegamu kan gumaachan ta’uus ibsaniiru. Bifuma wolfakkaatuun, Bitootessa 27, 2018 koreen hawaasaa, rakkoo ummanni Oromoo yeroo amma keessatti argamu ibsuudhaaf miseensota paarlaamaa Neezerland, koree haajaa biyya-alaa, dubbisuudhaaf beella kan qaban ta’uun beekameera.
Suuraa hiriira mormii Den Haag Bitootessa 22, 2018 keessaa hanga tokko.